Slindile Khanyile | May 18, 2020
KWABANYE yima kuthi qwebu ngendaba yokubaluleka kwezobuchwepheshe besimanjemanje okuhlale kukhulunywa ngabo ngoba ngaphandle kwalo buchwepheshe ngabe impilo imile nse njengoba kubheduke i-Corona.
Nokho-ke bakhona abakade bakhanyiseleka futhi asebenesikhathi beziphilisa ngakho njengoNksz Londeka Dlamini oyi-graphic designer nongumsunguli we-Izinga Creatives.
Lena yinkampani yezobuciko egxile ekusizeni izinkampani nabantu abafisa ukuzikhangisa ngokusebenzisa ubuchwepheshe. Ineminyaka emine yasungulwa. Ngaphambi kokuzisebenza wake waqashwa ezinkampanini zabezindaba ezihlukahlukene.
Okunye okwamsiza ukusheshe abone ukuthi nakuba eyiciko kodwa nokuba ngusomabhizinisi kusegazini kuyena.
“Imvamisa kunenkolelo yokuthi uma uyiciko ngeke waba ngusomabhizinisi, abantu bacabanga ukuthi ungaba okukodwa kwalezi zinto hhayi kokubili. Kodwa lokho akulona iqiniso, ungaba yiciko eliphendula isiphiwo salo ibhizinisi lingathembeli kuphela ekuqashweni,” usho kanje.
“Okunye okwangivula amehlo ukuthi ngesikhathi ngiqala ukuzisebenza ngake ngathola umsebenzi kumuntu esavumelana naye ukuthi uzongikhokhela uR6000 ngenyanga, mina ngangibona ukuthi kuzophileka ngeke kufane ngaleso sikhathi kanti ngokuhamba kwesikhathi ngizothola ukuthi yena wenza itshe lemali ngomsebenzi wami.”
Uthe emva kwalokho wanquma ukuthi ngeke aphinde athembele komunye umuntu ukuze azondle. Isinqumo sokugxila nakwezobuchwepheshe sagqugquzelwa nawukuthi wayefuna ukuqhamuka nokuhlukile.
“Umkhakha wezokukhangisa mudala, ugcwele amadoda amadala abelungu kanti futhi abasekho abantu abanemali yezikhangiso zethelevishini ezibizayo manje, ngangenzela ukuqhamuka nokuhlukile nanokuthi kwezobuchwepheshe sibasha sonke,” usho kanje.
Yize umkhakha umusha kodwa uthe kuningi abakwenzayo futhi maningi namathuba akhona.
“Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuzikhangaisa ngokusebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje kusho ukuba nekhasi lika-Facebook kuphela kanti umsebenzi ungaphezu kwalokho. Njengoba nemisebenzi ebiyenziwa kudala ingasekho nje kodwa kulo mkhakha wezobuchwepheshe miningi imisebenzi emisha eqhamukayo, kuphela kudingeka samukele ukushintsha kwezinto bese kubuyekezwa imikhakha efundiswa emanyuvesi,” kusho uNksz Dlamini.
UNksz Dlamini ukhulele eMlaza ngaphambi kokuthi bathuthele e-Westville nakhona bagcina sebesukile baya edolobheni.
Kwagqama esafunda amabanga aphansi ukuthi unesiphiwo sobuciko ngoba wayehlale ehamba phambili esifundweni se-Art, ecula futhi edansa.
Esephothule isikole waqala wafundela ubuntatheli e-DUT kodwa akaqedanga ngenxa yokushintsha kwesimo semali ekhaya. Ukuba yi-graphic designer wakufundela e-Hirt and Carter Graphic Design School.
“Ngesikhathi ngifika e-DUT ngangingazi nokuthi iyafundelwa i-graphic design. Ngicabanga ukuthi singabantu sibuye sizifake ingcindezi engenasidingo yokuthi kumele sisheshe sazi ukuthi yini esiyithandayo. Mina ngaqala ngithanda nokuba umthwebuli kodwa ngagcina senginokhwantalala uma isithombe singaphumanga kahle ngoba ngiwumuntu othanda ukwenza into ayenzisise. Ukuba yi-graphic designer kwangithola kona ngoba into obizelwe kuyona izozenzakalela, kumele ube nesineke,” kusho uNksz Dlamini.
Njengamanje i-Izinga Creatives iqashe abantu ababili kodwa kukhona abathathu abayitoho abasebenzayo kuye ngokuthi umsebenzi usuke ungakanani ngaleso sikhathi. Uthe okunye okumsizayo ukubambisana nezinye izinkampani ezincane nokuyinto athi kumele izinkampani zabantu abamnyama ziyijwayele.
Ungumama onabantwana ababili. Uthe yize kungelula ukuzisebenza nokuba ngumzali kodwa samsiza iseluleko asithola komunye umeluleki wakhe kudala.
“Wangitshela ukuthi kumele ngikwazi ukuhlukanisa umsebenzi, impilo nezami izidingo ngoba ngale kwalokho ngizokhathala. Ayikho inkinga uma kungukuthi ezintweni ezinhlanu ingane yakho enazo esikoleni ukwazi ukuya kwezimbili kuphela. Buza enganeni ukuthi yikuphi okubalulekile kuyona bese uya kulezo.
“Kumele uyibheke nento yokuthembela ezihlotsheni nasemndenini wakho, uzibuze ukuthi ziyakusiza noma zikufakela ukhwantalala. Mina nginomsizi wasendlini ongiphungulela umthwalo ngoba ngiyazazi nezinto engingakwazi ukuzenza. Ngisebenza zonke izinsuku kodwa nginaso isikhathi sezingane zami. Asiwona umndeni okwazi ukuhlaba ikhefu ngoDisemba nangoJanuwari ngoba ngisuke ngisebenza ngakho sesazijwayeza ukuthi thina sivakasha ngoFebhuwari ngoba kumele wenze lokhu okuzwana nawe nomndeni wakho.”
Ululeke abanye osomabhizinisi abancane ukuthi banganqeni ukubuye baqashwe isikhashana uma kuqhamuka ithuba elihle noma kungahambi kahle ebhizinisini ngoba ukuzisebenza akulula njengoba kushiwo.
Uthe ukuba nobudlelwane obuhle nabanye abantu kuyalisiza ibhizinisi likhule nokho uxwayisile ngokuthi lokho akusho ukuthi abantu bayakukweleta, kumele bakwenzele izinto zibe lula. Uthe kumele uzikhandle ukuze uthole umvuzo.